Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body 2019.2.55 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2019.2.55 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body
Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ, ကျောင်းသားများနှင့်အတွင်းပိုင်းမြင်ပိုကောင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်နားလည်ရန်လူ့ခန္ဓာဗေဒ Atlas ကိုအသုံးပြုဖို့သူအခန္ဓာဗေဒနိူးသန်းပေါင်းများစွာ Join!
နှင့်ကျောင်းစာအုပ်-Level အဓိပ္ပာယ်လည်းပါဝင်သည် - လူ့ခန္ဓာဗေဒ Atlas နားလည်ကူညီနဲ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံကိုဆကျသှယျဖို့မော်ဒယ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပေးထားပါတယ်။ အစားတစ်ဦးခန္ဓာဗေဒကျောင်းစာအုပ်၏, တစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်အသုံးပြုရန်, ဒါမှမဟုတ်ကို virtual ဓာတ်ခွဲခန်းအတွေ့အကြုံများဖန်တီးရန်။
အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အီတလီ, ဂျပန်, နှင့်မျက်မှောက်ရေးရာတရုတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူ 10000 ကျော်ခန္ဓာဗေဒမော်ဒယ်များပါဝင်သည်။
Excellence ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Illustrator ရဲ့ Award ဆု၏အသင်း * Winner
* ကျဆုံးခြင်း 2018 ဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်းမာရေးဆုပေးပွဲ '' ရွှေ Winner ။
" ... သိသိသာသာလက်တွေ့နှင့်အသေးစိတ် ... " - အဆိုပါဘော်စတွန်ကမ္ဘာလုံး
" ... စိတ်ထဲ-မှုတ်များနှင့်အမြဲအံ့သြဖွယ်ဒါကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းအတွက်။ " - ဒါဝိဒ်သည် Pogue, Yahoo ကဘဏ္ဍာရေး
"ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ [လူ့ခန္ဓာဗေဒ] Atlas မြင်နိုင်နှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့တစ်ဦးက & P ကို ​​app များကိုအစဉ်ငါ့သွားလာရင်းမှလူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်၎င်း၏ function ကိုရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်ကိုးကားခဲ့ကြပြီ။ " - Apps ကပနှင့်အတူဆရာများ
လူ့ခန္ဓာဗေဒ Atlas ရရှိနိုင်အဖြစ်တစ်သင်ယူဖို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အခမဲ့ကြော်ငြာအတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူအရှိဆုံးပြည့်စုံလူ့ခန္ဓာဗေဒ Atlas ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းဝယ်ယူယောက်ျားနှင့်ခွဲဖြာနိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးစုစုပေါင်းခန္ဓာဗေဒမော်ဒယ်များ, ဘုံကြွက်သားလုပ်ရပ်များ, select လုပ်ပါ mircroanatomy မော်ဒယ်များနှင့်နမူနာ animations တွေကိုပြီးပြည့်စုံပါဝင်သည်။ အပိုဆောင်း In-app ကိုဝယ်ယူမှုအသေးစိတ် 3D ပါးစပ်တွင်းမော်ဒယ်များနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ဘုံရောဂါဗေဒကိုရှင်းပြကြောင်း animations တွေကိုပါဝင်သည်ဖို့ Atlas တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။
Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body အား အခ်က္ျပပါ
tripwithreset စတိုး23.19k
Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2019.2.55
ထုတ်လုပ်သူ Visible Body
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.visiblebody.com/privacy
App Name: Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body
File Size: 776.12MB
Release date: 2019-06-19 14:19:01
လက်မှတ် SHA1: 90:1D:EE:91:57:3A:B5:28:18:19:29:AF:67:48:15:E2:6A:1C:3E:3D
အဖွဲ့အစည်း (O): Visible Body
Human Anatomy Atlas 2019: Complete 3D Human Body APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ